Oromiyaa: Paartii Bilxiginnaatif mallaqa buusnu nu dirqisiisaa jiru! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa: Paartii Bilxiginnaatif mallaqa buusnu nu dirqisiisaa jiru!
Oromiyaa: Paartii Bilxiginnaatif mallaqa buusnu nu dirqisiisaa jiru!
Boordin Koorporeeshinii Misooma Paarkiwwan Industirii Oromiyaa hoojii idilee dhiisee akka Paartii Bilxiginnaatif mallaqa buusnu nu dirqisiisaa jiru.
KMN:- Ebla 08/2020
Uummatin Carraa hojii nu uuma jedhee iddoo ofii irraa jiraatulleen Bilisaan keenneef ture. KORPOOREESHIIN MISOOMA PAARKIIWWAN INDUSTIRITII OROMIYAA kana.
Garuu isaan hojii uummataa Uumuurra Paartii isaanii Bilxiginnaa ijaaratan.
Sana Qofaa miti Miseensaa paartii yoo hin ta’in Dhiibba guddaa nurra gaggeeffama jira. Jedhuu hojjatootin mana kana keessa hojjetan.
KORPOOREESHINICHI Misoomaa Paarkiiwwan industirii Oromiya Kan Hundaa’eef Hojii hoj dhabdoota Oromiyaa keessa jiraatanuuf. Garuu dubbiin akkasii miti. Dirree siyaasa isaanii bal’iffachuuf itti dhimma bahaa jiru.
MISEENSA bilxiginnaa yoo hin taanee dhiibbaa gudda sirratti gageeffama. Buusii dirqamaa Paartii Bilxiginnaa tiif Buusi jedhu.
Kana malees kallattiiwwan garagaraatin dhimma ilaalcha paartii Bilxiginnaa qofa irratti akka xiyyeeffatamu barbaadu. Dargaggoon as keessa dalagu hunduu akka paartilee biroo dhiisee PP qofa filatu hojii isaatin doorsisaa jiru. Jedhan hojjettoonni dhaabbaticha keessaa yaada isaanii KMNif dhaamaniin.
KMN:- Ebla 07/2020
“Godina oromoo walloo aanaa arxummaa fursii irraa guyyaa kaleessaa shiira itti gaafatamaa dhaaba biltsiginnaa Fiqiree Haayiluu fi namoota biroon haala mirga dhala namaa sarbuun marfamee kan qabame obboleessi teenya Hasan Haajii kunoo galgala kana konkolaataa sadiin ajjabanii gara Aanaa Dawwaa Caffaa oofaa jiru. Dhiiroo namootni nama nagaa hiisisaa jirtan of adabadhaa. Uummatni keenyi jala bu’aa hordofaa!!
Bulchitootni gandaa Aanaa Dawwee Harawaa ganda Uranee Salaam jedhamutti bulchiinsa godinaan qabanis obbo Huseen Mohammadiif obbo Urgoo Adam hiikamaniiru. Warri sagalee taataniif hunduu galatoomaa jechaa ammayyuu milishotniif hidhattootni naannoo Affar sagalee dhaadannoo jajjabaa dhageessisaa waan jiruuf uummatni keenya oromoon walloo of eeggannoo jabeessaa malee mil’uuf illee of dagattanii akka hin teenye nuuf jedhiin.”